Yangoku ngeBridge & neBay umbono, iTub eshushu! Kufuphi nokuLoba kunye noKuloba!
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguSweet Homes
IiGetaways zamaKhaya aSweet ngeKhenketho ibonelela nge-Alsea Bay Getaway apho wena kunye nabahlobo bakho ninokupheka iintsuku zeCath phezu komlilo ovulekileyo elunxwemeni. I-Alsea Bay Getaway yindawo nje ekude nebhayi apho unokonwabela yonke imisebenzi yakho yamanzi oyithandayo njengokusukuma ngebhodi yokubheqa, ukuqubha, ukukhwela inqanawa, ukuloba, ukuloba kunye nokuloba.
Eli khaya langoku langaphambili libonelela ngembono yeWaldport Bridge kunye neAlsea Bay, etyebileyo ngezilwanyana zasendle kunye nobuhle. Iqela lakho liya kuziva lisekhaya kule floorplan enelanga enamagumbi ama-4, amagumbi okuhlambela ayi-3 kunye nombono wegumbi elikhulu elivulekileyo. Phaya ngasemva, uya kufumana iyadi ebiyelweyo kunye nebhafu yabucala eshushu.
Ukulala ukuya kuthi ga kwi-10 - 4 amagumbi okulala, 1 Kumkani, 1 Kumkani (enokwahlulwa ibe ziibhedi ezimbini ezinde ezongezelelweyo ezingamaTwin- kunye nesaziso sangaphambili), i-Queen kunye ne-Queen sofa sleeper, iibhafu ezi-3.
Izithuthi: zinelayisensi yesi-3 (Inyanzeliswe ngokungqongqo)
Umgangatho: ubusuku obu-2 ubuncinane; Ihlobo kunye neeHolide: 3-4 ubusuku obuncinci.
Imfuneko yeminyaka yobudala: Undwendwe lokuqala olubhalisiweyo kufuneka lube neminyaka engama-26 ubuncinane. Uninzi lweendwendwe kufuneka zibe ngaphezulu kwama-25, okanye abantwana abaphantsi kweliso labantu abadala.
*Ikhaya ngalinye lelomntu ngamnye. Izinto eziluncedo kunye nefenitshala zinokutshintshwa nangaliphi na ixesha. Nceda uqhagamshelane neofisi yethu ngayo nayiphi na imibuzo.
Waldport- Alsea Bay
Umbuki zindwendwe ngu- Sweet Homes
Izimvo eziyi-1 923
Nceda usebenzise ithebhulethi ekhaya xa ungena. PHAWULA: Abaphathi bezindlu abanako ukufikelela kwinkqubo yokuthumela imiyalezo yakwa-Airbnb emva kwentsimbi yesi-5pm. Ukuba awukwazi ukufikelela kwikhaya lakho fowunela i-Sweet Homes kwa-800-519-0437 kwaye ukhethe #1 emva kweeyure zikaxakeka. Umphathi wepropathi uya kukubuyisela umnxeba wakho kungekudala.
Ukubonelela ngokungena ngokupheleleyo ngaphandle koqhagamshelwano!
Nceda usebenzise ithebhulethi ekhaya xa ungena. PHAWULA: Abaphathi bezindlu abanako ukufikelela kwinkqubo yokuthumela imiyalezo yakwa-Airbnb emva kwentsimbi yesi-5pm. Ukuba awukwaz…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Waldport